FAQ's - မင်း - အလုပ်သမားဝန်ဆောင်မှု | မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၃၂၀၆၃၀၆-၅
အလုပ် – ကုမ္မဏီတွင်းလျှောက်လွှာ
အလုပ် – ကုမ္မဏီပြောင်းလျှောက်လွှာ
အလုပ် – အီးမေလ်းဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း
Elementum lectusaporta commodo suspendisse arcu, aliquam lectus faucibus.
ဆက်သွယ်ရန် +358 (09) 2316 1322
luuvaniementie2J 70,
00350 Helsinki, Finland.
© ၂၀၂၂ မင်း - အလုပ်သမားဝန်ဆောင်မှု | မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၃၂၀၆၃၀၆-၅ ဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ထားသည်။
Login to Minn Henkilöstöpalvelut (3206306-5)
Log In via Gmail
CreateaFree Minn Henkilöstöpalvelut (3206306-5) Account